माँ मनकामना देवीले सबैको कल्याण गरुन, बुधबार कार्तिक १ /अक्टोबर १८को राशिफल « Pana Khabar
श्री शाके १९३९ , बि.स. २०७४ साल कार्तिक १ गते बुधबार इश्वी सन २०१७ अक्टोबर १८ तारीख कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथी चन्द्रमा कन्या राशिमा सूर्य दक्षीणायन शरद ऋतु, कार्तिक संक्रान्ति ,नरकचतुर्दशी, कुकुर तिहार, तैलस्नान स्वान्तिचह्रेपूजा ।-ज्यो . पं . सरोज घिमिरे ।
बिश्वासिला ब्यत्तिहरुबाट सामान्य धोका हुन सक्नेछ । प्रतिश्पर्दिहरुको बृद्धि हुनाले कार्य सम्पादनमा बिषेश साबधानी अपनाउनु उत्तम रहनेछ । स्वास्थ क्षेत्रमा साधारण समस्या उत्पन्न हुनसक्ने सम्भाबना रहेकोछ । तपाईको ब्यत्तिगत कार्यक्षेत्रमा अरुको दबाबको महसुस हुनसक्नेछ । सामान्य खर्चकारक दिन रहेकोछ ।
बृष राशि ( इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो
ब्यत्तित्व बिकासका निम्ती आजको दिन बिषेश महत्व पुर्ण साबित हुन सक्नेछ । पारीवारीक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित गरेको उत्तम रहनेछ । नयाँकार्य प्रारम्भ गर्न अग्रज ब्यत्तिहरुको रायसल्लाह आवश्यक देखिएकोछ । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या देखापर्न सक्नेछ ।
पारिवारिक साथ सहयोग द्वारा कार्यसम्पादनमा सहयोग मिल्नाले आटँ र शाहसमा बृद्यि हुनेछ । जिबन साथिको अग्रसरतामा ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ प्राप्त हुनेछ । कार्यप्रतिको लगनसिलतामा बृद्यि हुनाले सामाजिक क्षेत्रमा प्रशंसित रहिनेछ । नयाँ मित्रहरु प्राप्तीको योग रहेको छ ।
कार्य सम्पादनमा ढिलाई रहेता पनि मित्रजनहरुको साथ सहयोग प्राप्त हुनाले आटँ शाहसमा बृद्यि हुनेछ । तपाईको कार्यसम्पादनको श्रेय अन्य ब्यत्तिहरु लाई सहज रुपमा प्राप्त हुनेछ । यात्राका क्षेत्रमा बिषेश साबधान रहनु पर्ने योग रहेकोछ । मान्यजनहरुको मार्गदर्शनले भाग्योदय गराउनेछ ।
सिंह राशि: मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे
सभा-सम्मेलन तथा भोजभतेर जन्य कार्यमा सरिक हुने अवसर प्राप्त रहनेछ । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा समय ब्यतित गर्न उत्तम समय रहेकोछ । बाणीमा मधुरता छाउनाले इष्टमित्रहरु प्रशम्सीत रहनेछन । स्वास्थ क्षेत्रमा क्रमीक सुधार आउने सम्भाबना रहेकोछ । साजेदारी कार्यमा हात नहालेकै बेश रहनेछ ।
अधिक आत्मविश्वासको कारण बन्न लागेका कार्यहरु बिफल हुनेछन । स्थिर सम्पतिमा गरिएको लगानी लाभदायक हुनेछ । अरुको बिश्वास गर्नाले दाम्पत्य जिवनमा खटपट उत्पन्न हुनेछ । मान्यजनको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर देखा पर्नेछन । खानपानको कारण स्वास्थका क्षेत्रमा सामान्य समस्याले सताउनेछ ।
स्थिर सम्पति बेच बिखनले गर्दा स्थान परिवर्तनको सम्भावना रहेको छ । टाढाको मित्रसँग अप्रत्यासित भेटघाटले मन प्रफुल्लीत रहनेछ । सामुहिक कार्यमा खर्च हुनाले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । हतारमा गरिएको निर्णयको कारण दाम्पत्य जिवनमा खटपट उत्पन्न हुनेछ । बोल्दा बिचार पु¥याउनुहोला ।
साझेदारीकार्यमा मनग्य लाभ प्राप्त हुनेछ । खोज तथा अनुसन्धानमुलक क्षेत्रमा बौदिकताको आवश्यक रहनेछ । प्रयत्न गर्नाले दिर्धकालिन कार्यहरु बन्नेछन । बाकपटुताको कारण कुरा काट्नेहरु प्रशंसा गर्न थाल्नेछन । पठन पाठन सफल रहनाले बौदिकताको सर्वत्र कदर हुनेछ ।
मनमा चन्चलता बढ्नाले निर्णय लिने क्षमतामा ह्रास आउनेछन । मात्रृ पक्षको सहयोगद्वारा गरिएका कार्यहरु सफल हुनेछ । सफल कार्यसम्पादनको लागी कडा परिश्रम गर्नु परे तापनि कार्य सफलताले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । चातुर्यता धुर्ततामा परिणत हुनाले अपजसको सामना गर्नुपर्नेछ ।
धार्मिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । पारिवारिक भावना अनुरुप क्रोधमा नियन्त्रण राख्नुहोला । अप्रत्याशित खवरले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । दुर्घटनापुर्ण यात्राको सम्भावना रहेकोले सजग भइ यात्रा गर्नुहोला । साथीसँग सामिप्यता बढे पनि लाभ भने ग्रहण गर्न सकिनेछैन ।
अरुद्वारा सम्पादित कार्यबाट यथेष्ट फाइदा लिन सकिनेछ । बाक चातुर्यताको कारण नेत्रृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । प्रतिष्ठित व्यक्तिसंगको संगतले व्यापार व्यवसायबाट लाभ लिन सकिनेछ । जिवनसाथीको सहयोगद्वारा अप्रत्यासित लाभको अवसर मिल्नेछ । खानपानको योग बन्नेछ ।
हिन्दु धर्मका पाँच कुराहरु जो अरु धर्ममा छैनन्,यी कुराहरुमा हिन्दु धर्मावलम्बीले गर्व गर्छन् !